25/06/2021 By fella News
Civil war ဖြစ်ပြီး ဘာအလုပ်အကိုင် မှ မရှိတော့ပါဘူး။ ဘယ်သူကို ထောက်ခံ ထောက်ခံ civil war ရဲ့ ရိုက်‌ခတ်မူ့ က အားလုံး ကို တပြေးညီ ရိုက်ခတ်ပါတော့ တယ်။ လက်ဘနွန် ဘီရွတ်မြို့ကြီး ပြားပြားဝတ် ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ အဖေ ခေါ်ရမှန်း မသိ ပေါ့။ အဖွဲ့အစည်း တွေကလဲ သူတလူငါ တမင်…နဲ့ပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ပြည်ပကို ဒုက္ခသယ် အဖြစ် ကိုယ့်မိသားစု လက်များ ကို
ကြစ်ကြစ် ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း သ‌င်္ဘောသေးသေး လေးပေါ်မှာ လူတွေပြွတ်သိပ်ပြီး ပင်လယ်ပြင် ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ တချို့လဲ သက်ဆိုင် ရာ နိူင်ငံ ကို ကံကောင်းထောက်မစွာ ရောက် ရှိခိုလှုံ နိူင်ခဲ့ပြီး။ တော်တော်များများက ပင်လယ် ကြီးထဲ မှာ စုံးစုံး မြိူတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကျန်ရစ်သူများ ရဲ့ ဒုက္ခ ကလဲ မသေးပါ။ တရားမျှတ ဘို့နေနေသာသာ ဥပဒေ ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လား? လို့ မေးယူရမဲ့ အနေအထား ဖြစ်လာပါတယ်။
ကိုယ်နှမ ကို ဝိုင်းမုဒိန်း ကျင့်နေလဲ …မပြောရဲတဲ့ ဘဝ ပြောလဲ တခါထဲ ပစ်သတ်လိုက်တာပါ..ပဲ။ ပြသနာ က ဆာလောင်လာတဲ့ ဝမ်းတစ် ထွာ ဖြေရှင်း ဘို့က နေ့စဉ်ပါ။ ဒါနဲ့ တချို့ လဲ ချက်ချင်း လက်ငင်း တောင်းစားရတဲ့ ဘဝ ကို သက်ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ဘို့ အမျိုးသား တစ်ဦး ဟာ တောင်းစားဘို့လဲ ရှက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အလေ့ကျ ပေါက်တဲ့ တောပန်းလေးတွေ ခူးပြီး မဝံ့မရဲ မျက်နှာလေး နဲ့ ရသလောက် ဈေးနဲ့ ရောင်းပြီး ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကို အကဲခတ်မိတဲ့ ပြင်သစ် ဂျာနယ်လစ်က ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပြီး တင်ပေးခဲ့တာ…တကမ္ဘာလုံး က ကိုယ်ချင်းစာ လို့ အလှုငွေ မီလျှံနဲ့ ချီပြီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ …တောင်းစားတယ် ဆိုတာ ကိုယ်အတ္တ နဲ့ မာန်မာန ကို ခေါက်ချိုးချိုးပစ် ခဲ့ရတာပါ။ အလုပ်အကိုင် ကလဲ မရှိ ၊ဝင်ငွေ ကလဲ မရှိ ၊ ဗိုက်ပြသနာ က နေစဉ် ဆိုတော့ …တော်တော် Rush ဖြစ်နေတာပါ။ ပြည်တွင်းစစ် က တနှစ်လဲ မဟုတ်..စုဆောင်း ထားတဲ့ ရက္ခာကလဲ ဘယ်လောက် ခံမှာ..တုန်း လက်ထဲ ကြစ်ကြစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့ ငွေ က ဘယ်လောက်ထိ ခံမှာ…တုန်း…
စစ်ဖြစ်လာ တော့ ငွေတန်ဘိုးတွေ ကျပြီး အစားအသောက် ဆေးဝါး ဈေးတွေ က မိုးမျှော်လာတော့..ကိုယ့် လက်ထဲ ရှိတဲ့ငွေက ပထမ တော့ သုံးနှစ်လောက် ထိုင်စား နိူင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထား ပေမဲ့ တကယ့် လက်တွေမှာ တော့ ရှစ်လ တောင်မခံတော့ပါဘူး။ ကုန်းပစ္စည်း တွေ ဆေးဝါးတွေ ဝယ်လို့ရတယ် ဆိုရင်ပဲ…ရောင်းသူကို ကျေးဇူး တင်နေရတဲ့ ခေတ်ပါ။ တချို့လဲ ကိုယ့်မိသားစု လဲ မရှိတော့ဘူး။
ကိုယ် ချစ်ရသူ လဲ မရှိတော့ဘူး။ သေမထူး နေမထူး ဖြစ်လာပြီး မိမိတကိုယ်လုံး ဗုံးတွေ ပတ်ပြီး အသေ ခံ ဗုံးခွဲပြီး…ခါးသီးလွန်းတဲ့ ဘဝ ကို နောက်ဆုံး လက်စား ချေခြင်း ဖြစ် လက်ပြ နူတ်ဆက်ခဲ့ ပြန် ပါတယ်။ တကယ်တော့…ပြည်တွင်းစစ် တွေက စတင်ဘို့ လွယ်သလောက် အဆုံးသတ်ဘို့…ဆယ်စု နှစ် လောက် အချိန်ပြန်ယူရပါတယ်။ ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေး ကာလ တင် တော်တော် အချိန်ပေး ရပါတယ်။
အကျိုးအကန်း တွေလဲ တော်တော် များသလို… သူတို့ ရင်ဘတ်ကြီးထဲ နာကျည်းမူ့ ခံစားချက်တွေ ကို ဖြေဖျောက် ဘို့ တော်တော် ကုစား..ရပါတယ်။ ဆိုက်ကို တွေ…ပေါ့။ ကြီးနိူင် ငယ်ညှင်း ဆိုတဲ့ wild law အတိုင်း ဖြတ်သန်း ခဲ့ရတဲ့ နှစ်တွေကမနဲ…ထစ်ကနဲ ဆို ဒေါသတွေ က ထွက်လာပြီး။ လွယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ လူတိုင်း သိကျပါ တယ်…တော်တော်မလွယ်တဲ့ ပြသနာတွေပါ။
သို့သော်…အခြေနေ က… တခါတလေ မှာ.. ရွေးချယ်ပိုင် ခွင့် မရှိတဲ့ အနေအထား တွေက ….ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ကံကြမ္မာ များကို ဖန်ဆင်း ရင်း…. လေးစားလျှက် wns ဆရာ wns ရေးသားချက်အား ပြန်လည်မျှဝေသည်။
crd-MOE WIN OO
ဘယျဘကျနနေေ ဘယျသူ့ကိုထောကျခံ ထောကျခံ လာမညျ့ လပိုငျးအတှငျးမှာ အားလုံးကို တပွေးညီ ထိခိုကျလာတျောမယျ့ Civil Warရဲ့ ရိုကျခိုကျမူဒဏျမြား
Civil war ဖွဈပွီး ဘာအလုပျအကိုငျ မှ မရှိတော့ပါဘူး။ ဘယျသူကို ထောကျခံ ထောကျခံ civil war ရဲ့ ရိုကျ‌ခတျမူ့ က အားလုံး ကို တပွေးညီ ရိုကျခတျပါတော့ တယျ။ လကျဘနှနျ ဘီရှတျမွို့ကွီး ပွားပွားဝတျ ခဲ့ပါတယျ။ ဘယျသူ့ အဖေ ချေါရမှနျး မသိ ပေါ့။ အဖှဲ့အစညျး တှကေလဲ သူတလူငါ တမငျ…နဲ့ပေါ့။ နောကျဆုံးတော့ ပွညျပကို ဒုက်ခသယျ အဖွဈ ကိုယျ့မိသားစု လကျမြား ကို
ကွဈကွဈ ပါအောငျ ဆုပျကိုငျရငျး သ‌င်ျဘောသေးသေး လေးပျေါမှာ လူတှပွှေတျသိပျပွီး ပငျလယျပွငျ ကို ဖွတျသနျးခဲ့ရပါတယျ။ တခြို့လဲ သကျဆိုငျ ရာ နိူငျငံ ကို ကံကောငျးထောကျမစှာ ရောကျ ရှိခိုလှုံ နိူငျခဲ့ပွီး။ တျောတျောမြားမြားက ပငျလယျ ကွီးထဲ မှာ စုံးစုံး မွိူတျခဲ့ပါတယျ။ ပွညျတှငျးကနျြရဈသူမြား ရဲ့ ဒုက်ခ ကလဲ မသေးပါ။ တရားမြှတ ဘို့နနေသောသာ ဥပဒေ ဆိုတာ ဂြိုနဲ့လား? လို့ မေးယူရမဲ့ အနအေထား ဖွဈလာပါတယျ။
ကိုယျနှမ ကို ဝိုငျးမုဒိနျး ကငျြ့နလေဲ …မပွောရဲတဲ့ ဘဝ ပွောလဲ တခါထဲ ပဈသတျလိုကျတာပါ..ပဲ။ ပွသနာ က ဆာလောငျလာတဲ့ ဝမျးတဈ ထှာ ဖွရှေငျး ဘို့က နစေ့ဉျပါ။ ဒါနဲ့ တခြို့ လဲ ခကျြခငျြး လကျငငျး တောငျးစားရတဲ့ ဘဝ ကို သကျဆငျးခဲ့ရပါတယျ။ စားဝတျနရေေး ပွလေညျဘို့ အမြိုးသား တဈဦး ဟာ တောငျးစားဘို့လဲ ရှကျပါတယျ။ ဒါနဲ့ အလကြေ့ ပေါကျတဲ့ တောပနျးလေးတှေ ခူးပွီး မဝံ့မရဲ မကျြနှာလေး နဲ့ ရသလောကျ ဈေးနဲ့ ရောငျးပွီး ဖွရှေငျးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါကို အကဲခတျမိတဲ့ ပွငျသဈ ဂြာနယျလဈက ဓါတျပုံ ရိုကျပွီး တငျပေးခဲ့တာ…တကမ်ဘာလုံး က ကိုယျခငျြးစာ လို့ အလှုငှေ မီလြှံနဲ့ ခြီပွီး ရရှိခဲ့ပါတယျ။
တကယျတော့ …တောငျးစားတယျ ဆိုတာ ကိုယျအတ်တ နဲ့ မာနျမာန ကို ခေါကျခြိုးခြိုးပဈ ခဲ့ရတာပါ။ အလုပျအကိုငျ ကလဲ မရှိ ၊ဝငျငှေ ကလဲ မရှိ ၊ ဗိုကျပွသနာ က နစေဉျ ဆိုတော့ …တျောတျော Rush ဖွဈနတောပါ။ ပွညျတှငျးစဈ က တနှဈလဲ မဟုတျ..စုဆောငျး ထားတဲ့ ရက်ခာကလဲ ဘယျလောကျ ခံမှာ..တုနျး လကျထဲ ကွဈကွဈပါအောငျ ဆုပျထားတဲ့ ငှေ က ဘယျလောကျထိ ခံမှာ…တုနျး…
စဈဖွဈလာ တော့ ငှတေနျဘိုးတှေ ကပြွီး အစားအသောကျ ဆေးဝါး ဈေးတှေ က မိုးမြှျောလာတော့..ကိုယျ့ လကျထဲ ရှိတဲ့ငှကေ ပထမ တော့ သုံးနှဈလောကျ ထိုငျစား နိူငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထား ပမေဲ့ တကယျ့ လကျတှမှော တော့ ရှဈလ တောငျမခံတော့ပါဘူး။ ကုနျးပစ်စညျး တှေ ဆေးဝါးတှေ ဝယျလို့ရတယျ ဆိုရငျပဲ…ရောငျးသူကို ကြေးဇူး တငျနရေတဲ့ ခတျေပါ။ တခြို့လဲ ကိုယျ့မိသားစု လဲ မရှိတော့ဘူး။
ကိုယျ ခဈြရသူ လဲ မရှိတော့ဘူး။ သမေထူး နမေထူး ဖွဈလာပွီး မိမိတကိုယျလုံး ဗုံးတှေ ပတျပွီး အသေ ခံ ဗုံးခှဲပွီး…ခါးသီးလှနျးတဲ့ ဘဝ ကို နောကျဆုံး လကျစား ခခြွေငျး ဖွဈ လကျပွ နူတျဆကျခဲ့ ပွနျ ပါတယျ။ တကယျတော့…ပွညျတှငျးစဈ တှကေ စတငျဘို့ လှယျသလောကျ အဆုံးသတျဘို့…ဆယျစု နှဈ လောကျ အခြိနျပွနျယူရပါတယျ။ ပွနျလညျထူ ထောငျရေး ကာလ တငျ တျောတျော အခြိနျပေး ရပါတယျ။
အကြိုးအကနျး တှလေဲ တျောတျော မြားသလို… သူတို့ ရငျဘတျကွီးထဲ နာကညျြးမူ့ ခံစားခကျြတှေ ကို ဖွဖြေောကျ ဘို့ တျောတျော ကုစား..ရပါတယျ။ ဆိုကျကို တှေ…ပေါ့။ ကွီးနိူငျ ငယျညှငျး ဆိုတဲ့ wild law အတိုငျး ဖွတျသနျး ခဲ့ရတဲ့ နှဈတှကေမနဲ…ထဈကနဲ ဆို ဒေါသတှေ က ထှကျလာပွီး။ လှယျတော့ မလှယျပါဘူး။ လူတိုငျး သိကပြါ တယျ…တျောတျောမလှယျတဲ့ ပွသနာတှပေါ။
သို့သျော…အခွနေေ က… တခါတလေ မှာ.. ရှေးခယျြပိုငျ ခှငျ့ မရှိတဲ့ အနအေထား တှကေ ….ကြှနျတျော တို့ရဲ့ ကံကွမ်မာ မြားကို ဖနျဆငျး ရငျး…. လေးစားလြှကျ wns ဆရာ wns ရေးသားခကျြအား ပွနျလညျမြှဝသေညျ။